‘अब सिमानामा सेना पठाएर भारतलाई ज,वा,फ दिनुपर्छ, जहाँ समस्या छ त्यहा छिट्टै सेना पठाउँ’ (भिडियो हेर्नुस्) – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/‘अब सिमानामा सेना पठाएर भारतलाई ज,वा,फ दिनुपर्छ, जहाँ समस्या छ त्यहा छिट्टै सेना पठाउँ’ (भिडियो हेर्नुस्)
‘अब सिमानामा सेना पठाएर भारतलाई ज,वा,फ दिनुपर्छ, जहाँ समस्या छ त्यहा छिट्टै सेना पठाउँ’ (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल एसोशियसनका पूर्व अध्यक्ष डा अञ्जनि कुमार झा उनी स्वास्थ्य क्षेत्रका मात्र मात्र होइनन् । उनले राजनीतिक विषयमा पनि उत्तिकै चासो राख्छन् । उनले नेपाली भूमी अतिक्रमण नरोकिएका कारण नेपाली सेनालाई तत्काल सिमानामा खटाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले सेनालाई सिमानामा तत्काल खटाएर मात्र भारतसंग वार्ताको लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
काठमाडौं । उनले मधेसी नागरिकले अहिले सम्म नेपाली सिमा सु,र,क्षा गर्दै आएको भएपनि नागरिकका बलमा मात्र सिमा सुरक्षा नहुने बताएका छन् । सिमाना रक्षा गर्दै आएका मधेसी समुदायलाई नै भारत परस्त भन्ने आरोप लाग्ने गरेको भन्दै उनले सेनालाई सिमानामा पठाए त्यसका पछि पछि मधेसी समुदाय सहयोगका लागि जाने उनको भनाई छ ।
उनले सेना सिमानामा पठाउने निर्णय गरे सेनाको पछाडी आफुपनि सिमा रक्षाका लागि जाने बताए । नेपालको सिमा अतिक्रमण हुँदा नेपाली सेनालाई किन प्रयोग गरिदैन उनले भने, तत्काल सिमानामा सेना पठाएर नेपालको उपस्थिती जनाउनपर्छ । उनले सेना पठाउँदैमा भारतसंग यु द्ध नहुने तर्क राखेका छन् । सेना सिमानामा पठाउने भनेको यु द्ध गर्न होइन, आफ्नो उपस्थिती देखाउन हो ।
उनीकोरोनाको समयमा अहिले सबैभन्दा अगाडी रहेर काम गर्ने ब्यक्ति नै स्वास्थ्यकर्मी हुन् । उनी स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मात्र चासो राख्दैनन् । कोरोनाकै कहरका बीच नेपाल भारत सिमाको विषय पनि चर्को रुपमा उठेको छ । नेपाली भूमी अ,ति,क्र,म,ण गरेर भारतले वाटो निर्माण गरेर उद्घा,ट,न समेत गरेको छ ।
नेपाली भूमी अ,ति,क्र,मि,त भएको र त्यसका लागि वार्तामा बस्न भन्दै नेपालले गरेको आ,ग्र,ह गर्दै आएको भारतले एकतर्फी रुपमा वाटो बनाएर उद्घाटन पनि गरेको हो । भारतले वार्ता अस्वीकार गर्दै नेपाली भूमी अतिक्रमण गर्दै गएपछि नेपालले पनि अतिक्रमित भूमी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेर निशान छापमा पनि राखिसकेको छ । भारतको छिमेकी मुलुक कसैसंग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । सँधै हेपाहा प्रवृत्ती देखाउने भारतलाई सिमानामा सेना खटाएर जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
निमुखा जनतामाथी प्रहरीको दादागिरी ! महानगरमा तनाव | प्रहरी मेरो साथी कि स’त्रु ?.. यि बृद्धाको आशु..